Political Page ပုလဲသွယ်: ၁၆-၃-၂ဝ၁၃ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အထူးသံတမန် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်စစချင်း လက်ပံတောင်းအရေး စတင်ဆွေးနွေး
၁၆-၃-၂ဝ၁၃ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အထူးသံတမန် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်စစချင်း လက်ပံတောင်းအရေး စတင်ဆွေးနွေး
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အာရှရေးရာ အထူးသံတမန်နှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အင်အားစုအချို့ ရန်ကုန်မြို့၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊ လက်ပံတောင်းတောင် အစီရင်ခံစာသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိကြောင်း အထူးသံတမန် ထောက်ခံပြောကြား (Eleven)
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အာရှရေးရာ အထူးသံတမန် Mr. Wang Yingfan သည် မတ် ၁၆ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အင်အားစုအချို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယင်းတွေ့ဆုံပွဲတွင် Mr. Wang Yingfan သည် လက်ပံတောင်းတောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကထား ဆွေးနွေးသွားခဲ့ပြီး ယင်းအစီရင်ခံစာသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့် အစီရင်ခံစာတစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု ထောက်ခံ ပြောကြားခဲ့သည်။
'' ကျွန်တော်မှတ်မိတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တရုတ်-မြန်မာ စီမံကိန်းတွေမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိဖို့ကိုပဲ အဓိကထားပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု တော်တော်ရှိပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ကိစ္စတွေကိုလည်း အစီရင်ခံစာထဲမှာ အများကြီး ဖော်ပြထားတာ တွေ့တယ်။ သက်ဆိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုက စာချုပ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ ရေးထားတယ်။ ဒါဟာ သေးသေးဖွဲဖွဲ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး'' ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဆွေက စီမံကိန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ယခင်စစ်အစိုးရ လက်ထက်ကကဲ့သို့ အစိုးရနှင့် အစိုးရတိုက်ရိုက် လုပ်ဆောင်ခြင်းအစား အစိုးရနှင့် ပြည်သူ၊ ပြည်သူနှင့် ပြည်သူစသဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ လုပ်ဆောင်မှုမျိုးကို လုပ်သင့်သည်ဟု ဆွေးနွေးမှုကို Mr. Wang Yingfan က အချို့စာချုပ်များသည် မြန်မာအစိုးရလက်ထက်က ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်သည် စစ်အစိုးရနှင့်သာ စာချုပ် ချုပ်ချင်ကြသည်ဟု အချို့က ပြောကြောင်း၊ တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးသည် နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော် ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခဲ့ကြောင်း စသည်ဖြင့် ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးသွားသည်။
ထို့ပြင် အာဖရိကတိုက် အလယ်ပိုင်းရှိ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်သည်ဟုဆိုကာ အနောက်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ခံထားသော နိုင်ငံများကိုလည်း တရုတ်နိုင်ငံက အလားတူ ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ခုတည်းကိုသာ ယင်းပေါ်လစီမျိုး ထားသည်မဟုတ်ကြောင်း၊ အချို့ အနောက်နိုင်ငံများက ယင်းကဲ့သို့ လုပ်သည်ကို ဝေဖန်မှုများ ရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆက်လက်ဆွေးနွေးသည်။
မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လက်နက်ကိုင်တို့အကြား တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် လက်နက်ရောင်းချကာ အမြတ်ငွေများ ရရှိနေပါက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုအတွက် အမှန်တကယ် ကူညီပေးနိုင်ရန် ခက်ခဲမည်ကို အချို့က စိုးရိမ်နေကြောင်း နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာတစ်ဦး၏ ဆွေးနွေးမှုကိုလည်း ၎င်းက တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများဆုံး ပြုလုပ်ထားသည့် နိုင်ငံဖြစ်၍ မြန်မာပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ၎င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများကို အမှန်တကယ် ကူညီနိုင်ကြောင်း၊ ရွှေလီမြို့၌လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲနှစ်ခုကို ကူညီဖော်ဆောင်ပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ရှေ့ဆက်သွားမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြန်လည်ဆွေးနွေးသည်။
ဆွးနွေးပွဲသို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစု၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ စသည့် ပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုဗဟို (MPC)၊ ပြည်တွင်း NGO တစ်ခုဖြစ်သည့် မြန်မာမင်္ဂလာအဖွဲ့ စသည့် အဖွဲ့များမှ တာဝန်ရှိသူအချို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
Mr. Wang Yingfan နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်သူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဉာဏ်ဝင်းက '' ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကို ကျွန်တော် တော်တော် အားရတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ခေါင်းဆောင်တဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာကို သူသုံးသပ်သွားတာတွေက ကောင်းပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ဒီအစီရင်ခံစာအပေါ် သဘောထားကိုလည်း ဒီနေရာမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ ရလိုက်ပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအောက်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေကို အားလုံးက လိုက်နာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အရင်တည်းက ရှိနေတဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုက ပျက်လို့မရပါဘူး။ ဒါကလည်း နှစ်ဖက်လုံးအတွက်ပါ'' ဟု သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
Mr. Wang Yingfan သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အာရှရေးရာ အထူးသံတမန်အဖြစ် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် မတ် ၁၁ ရက်ကမှ ခန့်အပ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံအကြား ကိစ္စရပ်များကို အဓိကဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံထားရသူဖြစ်ပြီး အာရှရေးရာ အထူးသံတမန်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကို ပထမဆုံး လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကာ မတ် ၁၅ ရက်က နေပြည်တော်၌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်း၊ သမ္မတရုံး ဒုဝန်ကြီး ဦးအောင်သိန်းတို့နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
• Wang Yingfan, male, Han nationality, isanative of Tuquan, Inner Mongolia. He was born in 1942, and graduated from the Beijing Foreign Languages Institute. He held posts in the Chinese embassies of Ghana and the U.K., and he served as ambassador to the Philippines until 1990. Wang was appointed vice-minister of the Ministry of Foreign Affairs in 1995, and he was elected as vice-chairman of the foreign affairs committee of the NPC in 2003. He is married, with one daughter.
• 1964-1967 - Staff member, Office of Charge d'Affaires of the PRC to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
• 1967-1972 - Staff member, Department of Translation and Interpretation, Ministry of Foreign Affairs (MFA) of the PRC
• 1972-1975 - Attache, Chinese Embassy in the Republic of Ghana
• 1975-1978 - Attache, Chinese Embassy in the Republic of the Phillipines
• 1978-1988 - Deputy Director, Director, and then Deputy Director-General, Department of Asian Affairs, MFA
• 1988-1990 - Chinese Ambassador to the Republic of the Philippines
• 1990-1994 - Director-General, Department of Asian Affairs, MFA
• 1994-1995 - Assistant Minister, MFA
• 1995-2000 - Vice-Minster, MFA
• 2000 – 2003 - Ambassador and Permanent Representative of the PRC to the United Nations
Posted by Dr. Tint Swe at 10:05 AM